🥇 ▷ iMessage: Waxay wataan Codsiga Fariinta Apple ee Android ✅
iMessage: Waxay wataan Codsiga Fariinta Apple ee Android
Shalay ayaa ka soo muuqday Google Play, dukaanka Google ee qalabka Android, waa barnaamij loo yaqaan iMessage Chat for Android. In kasta oo ay u muuqato wax aan caadi ahayn, waxay u muuqataa inay ku guuleysteen inay qaadaan adeegga iMessage-ka caanka ah ee Apple oo loo adeegsado aaladda Android.
Waa maxay iMessage?
Kuwa aan aqoon barnaamijkan, iMessage waa dalabka Apple oo noo oggolaanaya inaan is weydaarsano farriimaha qoraalka, sawirada iyo fiidiyowga oo bilaash ah inta u dhexeysa isticmaaleyaasha iOS (iPhone, iPod taabashada, iPad mini, iPad mini) iyo isticmaaleyaasha OS X ( iMac, MacBook, Mac mini, iwm).
Waa markii ugu horreysay oo codsi sidan oo kale ah loo fuliyo inta udhaxeysa iOS iyo Android
Sida ku xusan wixii ay ka faalloodeen, dalabka wuxuu umuuqdaa inuu sifiican ushaqeynayo, howshiisa waxay lamid tahay mida la sheegay adeega ku saabsan kumbuyuutarrada iyo aaladaha mobilada ee Apple, kaliya gali ID ID iyo furaha sirta ah si loo cadeeyo marin u helka adeega, maareynta u isticmaal iMessage-ka Android.
Adeegsiga adeeggan oo ah meel ka baxsan kuwa Apple, iOS iyo OS X, dammaanad kama qaadanayo inay aamin tahay. In kasta oo aan ognahay in markaan u isticmaalno arjiga masraxa loogu talagay in loogu talagalay, xogtayagu waxay ku dhamaan doontaa adeegayaasha Apple. Arinka ku saabsan adeegsiga dalabka masraxa Android ma ogin halka ay aadi karaan, waxay u adeegsan karaan isla adeegayaasha Apple inay awoodaan inay si sax ah u shaqeeyaan.
Codsi uusan Google qaadanin si looga baxo Google Play
Dhibaatada tan ayaa ah, in kasta oo xogteena oo dhan ay ku taalay server-ka Apple, ma garan karno haddii ka hor, kuwan oo dhan, ay soo mareen madal kale oo hayn kara macluumaadka muhiimadda weyn noo leh, si aan u bilowno, waa inaan xasuusnaano Aqoonsigayaga Apple Waxaa laxiriira kaadhka amaahda macluumaadkanna wuxuu ku joogsan karaa gacanta dhinacyada saddexaad.
Sababtaas awgeed, marka lagu daro xaqiiqda ah in gelitaanka iMessage lagu sameeyay hal madal ilaa meel kale ayadoon fasax laga helin Apple, Google wuxuu go’aansaday inuu ka saaro barnaamijka dukaankiisa dalabka, Google Play, taasoo ka dhigeysa arjiga hawlgalka kaliya qalabka Android ee rakibay. waxaa kahor inta aan laga saarin.
Haddii aad fursad u heshay inaad isku daydo, ha ka laba noqon inaad noo sheegto waaya aragnimadaada ee faallooyinka.